DAAWO: Baarlamanka Puntland xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo arrimaha maxalliga ah ee gobol kale oo Somalia ka tirsan? (Go’aan ay kasoo saari rabaan…) | Hadalsame Media
Home Wararka DAAWO: Baarlamanka Puntland xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo arrimaha maxalliga...
DAAWO: Baarlamanka Puntland xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo arrimaha maxalliga ah ee gobol kale oo Somalia ka tirsan? (Go’aan ay kasoo saari rabaan…)
(Garoowe) 28 Juun 2020 – Wararka ka imanaya Garoowe ayaa sheegaya in Baarlamanka Puntland ay maanta si aad uga dooddeen metelaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya, taasoo ay aad u diidanaayeen, balse meel martay.
Mudanayaasha qaarkood oo Gole-goboleedka ka dhex hadlay ayaa ku eedeeyey DFS, Madasha Xisbiyada, maamullada HirShabeelle, KGS iyo Galmudug ku eedeeyey in ay faquuqayaan Puntland iyo Jubbaland.
Xildhibaannada qaarkood ayaa xitaa sida warku sheegayo sooba jeediyey in ay ”Puntland ka tashato Soomaaliya” isla markaasna ku dhawaaqdo ‘madax-banaani”, sida ay hadalka u yiraahdeen.
Wararku waxay intaa raacinayaan in Baarlamanka Puntland uu soo saari doono go’aan ka dhan ah metelaadda Gobolka Banaadir, waxaa sidoo kale laga yaabaa inay iyaduna war soo saarto xukuumadda Puntland.
Halkan hoose ka daawo xildhibaannada oo ay qaarkood jeedinayaan hadallo jaa’ifo iyo aflagaaddo ah oo aan ku haboonayn madal baarlamaan iyo halka loola dan leeyahay intaba.
Previous articleTOOS u daawo: Sheffield United vs Arsenal – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleDEG DEG: Ingiriiska & Midowga Yurub oo soo dhoweeyey qabashada doorasho ”qof & cod ah”